जसको मुटु लिएर बाँचेका थिए उनकै आमालाई भेटन् गएको यो तस्बिरले संसारलाई रु’वायो ! – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > जसको मुटु लिएर बाँचेका थिए उनकै आमालाई भेटन् गएको यो तस्बिरले संसारलाई रु’वायो !
admin December 17, 2021 December 17, 2021 जीवनशैली, रोचक 0
आफुले जन्माएर हुर्काएको सन्तानको नि’धनमा जो कोहि पनि भा’वबिह्वल हुनु सामान्य कुरा हो ।
तर आँफुले जन्माएर १९ वर्ष पुगेको छोरोको नि’धन हुनु र नि’धन भएको छोरा २ वर्षपछि आउदा जन्मदिने आमालाई कस्तो होला प्रसंग हो अमेरिकाको अलास्कामा हालै घ’टेको एउटा घ’टनाको । बेकी टर्नी नामक महिलाले आफ्ना छोराको रुपमा छोराकै मुटु प्रत्यारोपण गरिएका युवकलाई देखेपछि निकै दंग परिन् ।
अझ यो सप्राइज उनलाई आफूले विवाह गर्न लागेको केटाले दिएका कारण उनी अझ खुशी भइन् । दुलही बनेकी बेकी टर्नी दंग भइन्, उनको गला अवरुद्ध भयो । दुलाहा बनेका केलीले बेकीलाई उनको म’रिसकेको भनिएका छोराको याद दिलाएर उपहार दिएका थिए ।
बेकीका छोरा सन् २०१५ मा १९ वर्षको उमेरमा बितेका थिए । ४० वर्षकी बेकीले पनि आफ्नो छोराको मुटु प्र’त्यारोपण गरेका ज्याकवको धड्कन स्टेथेस्कोप लगाएर सुनेकी थिइन् ।
उनको यही तस्बिर अहिले सामाजिक सञ्जालमा निकै फैलिएको छ । ज्याकव बिहेको समारोहमा उपस्थित हुन ४ हजार ८ सय किलोमिटरको यात्रा गरेर आएको डेलिमेलले लखेको छ ।
के कारणले जति प्रयास गर्दा पनि पूर्ण सन्तुष्टि हुँदैन ?
किन हजारौँ गृहिणीले आफ्नो ज्यान लिन्छन्?
लकडाउनमा ९६ वर्षिय वृद्धले ८४ वर्षीय वृद्धासंग गरे धुमधामसंग विबाह (भिडियो हेर्नुस्)